ကလေးငယ်များနှင့် လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေသွားရင် သတိပြုကြပါ မနေ့ညက၊ အင်းစိန်၊ အာလိမ်ငါးဆင့်ဘုရားက ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲဈေးတန်းကို မိသားစုနဲ့ လျှောက်ဖြစ်တယ်။ သားအငယ်လေး (၂ နှစ်၊ ၅ လ အရွယ်)ကို ချီပြီးတော့၊ ဘုရားဝင်းထဲကို ဝင်မိတော့၊ လူတွေက တစ်အားကျပ်နေတယ်။ နည်းနည်းလောက် တိုးမိပြီးတော့၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက […]
မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် သက်ကြီးလူရွှင်တော် ထောက်ပံ့ရေးရန်ပုံငွေပွဲကို အလှူငွေ(10)သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်တို့သားအဖ
မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် သက်ကြီးလူရွှင်တော် ထောက်ပံ့ရေးရန်ပုံငွေပွဲကို အလှူငွေ(10)သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်တို့သားအဖ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ရရှိနေတဲ့ ပြည်သူချစ် အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ဇာတ်ကားတိုင်းကတော့ ရုံအပြည့်နဲ့ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးကြပြီး သူ့ရဲ့ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေအပြင်ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ သာမက […]
“အသားညိုတဲ့သူတွေက ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ အချက်(၄)ချက်”
အသားဖြူတဲ့သူနဲ့ အသားညိုတဲ့သူ ဘယ်သူက ပိုလှသလဲဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသားဖြူချင်လို့ အသားဖြူဆေးထိုးတဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ အသားညိုညိုလေးမှကြိုက်လို့ နေပူစာလှုံတဲ့သူလေးတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော အသားညိုတာလေးက ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေက သက်သေပြနေပါတယ်နော်။ (၁) စိုပြည်တဲ့ အသားအရေအမျိုးအစား အသားညိုတဲ့သူလေးတွေက အသားခြောက်တာမျိုး မရှိဘဲ၊ စိုပြည်တဲ့ […]
( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ) ဆုရှင်
( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ) မဟာကံထူးရှင်ပါ… အခုမှဘဲ သိတော့တယ် ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ ( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ) မဟာကံထူးရှင်ပါ အခုမှဘဲ သိ​တော့တယ်​ […]
“သိန်းတစ်သောင်းကျော် ထီဆုကြီး ပေါက်တဲ့သူ ဘဝပျက်သွားရှာပြီ”
သိန်းတစ်သောင်းကျော် ထီဆုကြီး ပေါက်တဲ့သူ ဘဝပျက်သွားရှာပြီ ထီပေါက်ပြီး မူးယစ်ဆေးစွဲသွားခဲ့သည် ဟင်းသီဟင်းရွတ်ရောင်းသူ… ဇူလိုင် ၁၆ ရက် ၂၀၁၈ ရက်နေ့ ထွက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းထီ ပထမဆု နှစ်စောင်တွဲ ဘတ်ငွေ ၁၂ သန်း (ကျပ်သိန်း၁၀၀၀ ကျော်)ပေါက်ခဲ့တဲ့စမုဆာခွန်း ခရိုင်မှာနေထိုင်နေသူ နိုင်ယုထ၀ုန် […]
လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ပျံ့နှံ့လာသော ဘုရားပေါ်မှာ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ စုံတွဲပုံများ
လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ပျံ့နှံ့လာသော ဘုရားပေါ်မှာ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ စုံတွဲပုံများ ဘယ်တုန်းက ဘယ်ဘုရားမှာဆိုတာ တိတိကျကျ မသိရသေးပေမယ့် အခုလို မြင်ကွင်းမျိုးကို မြင်သူတိုင်းက ရှုံ့ချသင့်တာ ကြောင့်ဖြစ်တာရယ် …. ဘုရားပေါ်ဆိုတာ မေ့နေပီး ဟော်တယ်ခန်းထဲ ရောက်နေတာများ ထင်နေသလား? နောက်နောင် များတွင် အခြားအခြားသော လူငယ်စုံတွဲများ […]
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ မတော်တဆ သေဆုံးသွားသော ကိုဇွဲလင်းမောင် ၏ရုပ်ကလာပ် နေရပ်ရွာဇာတိသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ မတော်တဆ သေဆုံးသွားသော ကိုဇွဲလင်းမောင် ၏ရုပ်ကလာပ် နေရပ်ရွာဇာတိသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ ၂၀၁၉ သြဂုတ်လ ၇ ရက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့နယ် မို့ဒုံ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမား၃ဦးတို့သည်ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ မနက် ၀၇:၀၀ချိန်ခန့်က မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းအတွင်းတွင် လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရေအားထိန်းသိမ်းရေးအခန်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ရေတံခါးကိုပိတ်ခိုင်းခဲ့စဉ် […]
သူများကိုကယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန် ကိုယ့်အိမ်မှာရေကြီးနေပြီဆိုတဲ့ ဝေဠုကျော် ဝေဠုကျော် က သူများကိုကယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ သူ့ရဲ့အိမ်ရေကြီးနေလို့ ပစ္စည်းတွေ နေရာပြောင်းနေရပြီတဲ့။ သူဟာ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်ထက် ပရဟိတအလုပ်ကို ပိုဦးစားပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဝေဠုကျော်တစ်ယောက် မိုးတွေရွာ ရေတွေကြီးလို့ သူ့အိမ်ထဲတောင် ရေတွေ ဝင်နေပါပြီတဲ့။ ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ရပြောင်းရလို့ တစ်ယောက်တည်းတောင်မနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ‘’ကယ်ကြပါအုံးဗျို့။ […]